Khipha ikhabethe lokususa ikhabethe elimanzi elimanzi elimanzi kanye nefektri | Ukulingisa
Igumbi lokugaya elimanzi luhlobo lwegumbi lokuhlunga lokuhlanza amanzi. Impuphu ehlakazekile ekhiqizwe ekusebenzeni kokugaya noma kokupholisha ihudulwa yifeni enkulu yevolumu yomoya futhi ingena egumbini lokususa uthuli egumbini lokugaya. Kuningi kwamadivayisi wokuhlanza umfutho ophakeme afakiwe egumbini lokususa uthuli, futhi uthuli negesi kuhlanganiswa komunye nomunye ngaphansi kwethonya lenkungu yamanzi okufafaza, kwandisa isisindo bese kuba udaka futhi kuwela kusinki. Ingxenye yenkungu yamanzi entantayo ivinjwe ungqimba lokuhlunga olungangenwa ngamanzi engxenyeni engenhla yegumbi lokususa uthuli, futhi ngemuva kokuhlunga, igesi ehlanzekile kuphela efinyelela ezingeni futhi ichichime ivela engxenyeni engenhla. Udaka olucwila kusinki luyahlungwa lulungiswe bese luyasuswa.
Igumbi lokugaya lesifutho lenzelwe ipuleti lensimbi elenziwe ngezitini nangombala kanye nokwehla kwamanzi emzimbeni kwe-YT
system, kanye ne-fan fan engaphansi kwengcindezi edonsa ngokusebenzisa ipuleti lokwehlisa amanzi emzimbeni. Isihloko sithi
kufuthwe phansi ngokuqhubekayo ukukhulisa indawo yokuxhumana phakathi kothuli nenkungu yeqhwa bese kungqubuzana. Iyabanjwa icindezelwe echibini elingezansi ukuhlanza uthuli ..
1. Ukwamukela indlela yengcindezi engemihle yokushintshaniswa komoya wonke e-workshop, usebenzisa umoya omkhulu
ivolumu fan yokwenza uthuli lwe-workshop lususwe ngokushesha futhi luphele ngokuphelele endaweni yokusebenza, indawo enkulu, inkomba eyodwa noma ngaphezulu, akukho-angle efile, akukho ukujikeleza, okushintsha ngokuphelele indawo yokusebenza yothuli nentuthu.
2. Ngokwesimo sangempela sesiza somsebenzisi, umgomo ofanayo ungasetshenziswa ukuhlela nokuklama izikimu ezahlukahlukene ngokuguquguqukayo, ngaphandle kokuthinta ukuhamba komsebenzi kokuqala ngangokunokwenzeka.
3. Ukonga i-Energy, ububanzi obusebenzayo obusebenza obungamamitha ama-2 wokushintshana kwamandla womoya osindisa cishe i-1.5KW, uma kuqhathaniswa nohlelo oludala lokususa uthuli ukufeza izindleko eziphansi, ukusebenza kahle okukhulu.
4.Ngomphumela wokushintshaniswa komoya omubi, ishabhu lonke liyaphola futhi kakhulu
kunciphisa umuzwa wokuphanga e-workshop.
Igumbi lokugaya elimanzi linezici ezilandelayo:
(1.) Uma usebenzisa ukusetshenziswa kwamandla okufanayo, ukusebenza kahle kwegumbi lokugaya elimanzi kuphakeme kunekamelo lokugaya elomile. Igumbi lokugaya elinamandla amakhulu ligeza izinhlayiya zothuli ngaphansi kuka-0.5mm, futhi ukusebenza kahle kokususwa kothuli kusesezingeni eliphezulu kakhulu.
(2.) Ukusebenza kahle kokususwa kothuli kwegumbi lokugaya elimanzi akuqhathaniseki nje kuphela nalokho kwezikhwama zendwangu neziphephetha zikagesi, kodwa futhi kufanele nezimo zokususa uthuli lezi zingqimba ezingakwazi ukuzenza. Igumbi lokugaya elimanzi linokusebenza kahle kokwelashwa kwegesi kadoti wokuhlanza ukumelana okuphezulu, umswakama ophakeme, izinga lokushisa eliphakeme, igesi evuthayo futhi eqhumayo equkethe uthuli.
(3.) Ngenkathi isusa izinhlayiya zothuli emgodini onothuli, ingasusa futhi umhwamuko wamanzi nezinye izinto ezingcolisa igesi ezinobuthi futhi eziyingozi kule gesi. Ngakho-ke, igumbi lokugaya elimanzi alikwazi ukususa uthuli kuphela, kepha futhi lingadlala indima ekwelashweni kwegesi yokukhipha.
(4.) Indle ekhishwe egumbini lokugaya elimanzi idinga ukwelashwa, futhi amanzi okugeza acacisiwe kufanele asetshenziswe futhi, uma kungenjalo ngeke nje kubangele ukungcola kwesibili, kepha futhi kuzomosha nemithombo yamanzi.
(5.) Lapho kuhlanzwa ukungcola okulimazayo, amanzi okuwasha (noma uketshezi) azobola abe sezingeni elithile. Ngakho-ke, okokusebenza okususa uthuli kufanele kube nezinyathelo ezithile zokulwa nokugqwala.
(6.) Amakamelo okugaya amanzi awafanele ukuhlanza i-organic waste gas equkethe i-hydrophobic kanye ne-hydraulic dust.
(7.) Kulula ukubanda lapho usebenzisa izigayo ezimanzi ezindaweni ezibandayo, ngakho-ke kufanele kuthathwe izinyathelo zokulwa namakhaza.
Langaphambilini Izinsizakalo ezijwayelekile ze-Manufactur Water Treatment Services - Izixazululo Zokwelashwa Kwamanzi Angcolile - Yiting
Olandelayo: Ikhabethe lokususa uthuli elomile
Izimboni Ezimanzi Zesimboni
I-Grinder Emanzi Yokusebenzisela Ukuhweba
Umshini Wokusila Okumanzi
Wet Grinder Machine Inani
Izisetshenziswa Zokugaya Ezimanzi
Ilayisi Elimanzi Umshini Wokugaya